Daawo nolosha dadka ka cararay Boko Haram - BBC Somali
Daawo nolosha dadka ka cararay Boko Haram
Dad ka bedbaaday Boko Xaraam
In ka badan labo milyan oo reer Nijeriya ah ayaa lixdii sanadood ee la soo dhaafay guryahoodii ugu cararay rabshadaha Boko Xaram. Waxayna dadkaasi ku jiraan xerada qaxootiga ee ugu weyn ee ku taala magaalada Dalori ee Waqootiga Bari ee dalka Nijeeriya ku taala iyagoo loo dhisay teendhoyin cad cad oo madaxa isku haya ilaa iyo fogaan ka badan hal kiiloo mitir.
Wariyaha BBCda Jimeh Salex ayaa la kulmay qaar ka mid ah 18000 ee qof ee degan xiriradaasi oo ay uga sheekeeyeen sida ay uga bedaadeen weerarada Ururka Boko Xaraam iyo sida hadda noloshoodu tahay.
Dadka sida sahlan lagu garan karo ee ku jira xeraddan Dalora, waxaa ka mid ah Mr. Mutti oo ku booday ulo. Waa ninkan oo 55 jir ah oo hore gacansade ugu ahaan jiray oo uu ka soo caray Bama, isaga kumanyaal kale ka dib markii Meleeshida Boko Xaraam ay magaaladooda soo weerartay oo burbur iyo dhan u geystay sanadkii 2014kii. Xabad ayaa uga dhacday lugta bixidda ah oo lugta si xun uga jabisay.
Waxaa uu yiri Mr. Mutti, ' Sariinta ayaa saarnaa aroor hore markii ay weerarka soo qaadeen. Waxaa ka soo kabanaya dhaawaca lugta ay iga gaarsiiyeen weerar hore.'
Boko Xaraam ayaa dilay wiilkiisii 24 jirka ahaa, waxayna ka afduubteen laba gabdhood. Hadda waxaa uu kula nool yahay xeradan Dalori labadiisa xaas.
Mrs. Modu oo ka mid ka mid ah dadka cunadda ka kariya kushiinka xeradda ayaanan ilaa iyo hadda ogeyn halka sideed caruur ah oo ay dhashay iyo ninkeeda ay ku sugan yihiin.
Qaar ka mid ah caruurteeda Ururka Boko Xaraam ayaa guriga ka watay, qaar kalena iskuulka ayaa laga afduubay. Waxay tiri, ' waa ooyaan markii aan soo xusuusto'.
Shaqada cunto karinta ah ayaa maamulku waxay u siiyeen Mrs. Mudo si naxariis ah oo la rabo in ay nafteeda ku maaweyliso maxaa yeelay qoyskeeda cidi kalama joogto.
Mrs. Ammuna oo ka mid ah dadka ugu waaweyn ee xeradda ayaa waxay tiri da'deedu waa boqol sanno. Mrs. Ammuna ayaa hore waxay u gadi jirtay caano, ninkiina waa uu ka dhntay walina waxaa xanuun ku haya in ay labadeedii guri ee magaaladda Bama ay ku weyday weerarka Boko Xaraam.
Waxay tiri furayaashii guriga qori caaradiis waxaa iiga qaatay dagaalyahanada Boko Xaraam. Hase ahaatee, hadda waxay ku rajo weyn tahay in ciidanku ay dib u qabsadeen inta badan dhulkii ay gacanta ururka Boko Xaraam. Ciidankuna ay dib ugu celin doonaan gurigeeda markii ay amaan noqoto oo dadka la celin karo.
Mr and Mrs Modu Bulama
Marka laga gudbo xaloolxumada ka jirta xeradda Dalori, qaar ka mid ah dadka xeradda ku jira ayaa fursan u helay in ay isjeclaadaan. Modu Bulama ayaa xeradda yimid ka dib markii xaaskiisii iyo labo caruur ah ay ka dileen Boko Xaraam.
Isaga xeradda ka caawinayay in cuno dadka loo qeybsho, ayaa waxaa uu la kulmay qof dumar ah oo ninkiidii colaadda lagu dilay.
Markii ay ka sheekeysteen waxii ku dhacay labadoodaba ka dib ayaa waxaa uu Mr. Bulama weydiistay in ay guursato. Hase ahaatee joogitaan xeraadda ka baxsana dhaqanka ee waxaa uu soo ururiyay konton doolar oo mehar ah oo gabadha oo aan dooneyn in magaceeda la sheego la siiyay.